मनैदेखि असुरक्षित | NayaPusta
Home » नयाँ पुस्ता वार्ता » मनैदेखि असुरक्षित
March 30, 2015 9:46 am Category: नयाँ पुस्ता वार्ता Leaveacomment A+ / A-
नेपाली समाजमा महिलालाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्छ । तर किशोरीहरू के सोच्छन् त नेपाली समाजका बारेमा ? के उनीहरू सहर बजारमा एक्लै हिड्दा सुरक्षित अनुभव गर्छन् त? गर्दैनन् । त्यसैले उनीहरू साथी लिएर हिड्छन् । फेरि प्रश्न किनमा नै अड्किन्छ ।
सजना बस्नेत: अब एक्लै हिँड्यो भने जे पनि हुन सक्छ, केहि गरी साथीहरुसँग हिँडयो भने आमाबुबासँग हिड्यो भने अलिकति सुरक्षित अनुभव हुन्छ । किनभने हामीलाई अलिकति गह्रो पर्यो हाम्रो साथी वा आमाबुबाले सहयोग गर्न सक्छन् ।
रजनी दुलाल: मलाईचाहिँ साथी लिएर हिँड्न मनलाग्छ किनकि साथी भयो भने केटाहरूले जिस्काउँदैन, एक्लै भयो भने जिस्काउँछ । एक्लै हिँड्यो भने केटाहरूले गेष्ट हाउस्मा हिँड अनि त्यहाँ बसौँ मेरो कोठामा जाउँ भन्छन् नि । त्यस्तो भयो भने एक्लै हैन साथीहरुसगँ हिँड्न मन लाग्छ ।
रुचि कार्की:म साथीसँग समूहमा हिँड्न रुचाउँछु किनभने एक्लै हिँड्दा हिम्मत आउँदैन । कसैलाई पनि नहेरी हिड्छु । समूहमा हिँड्दा हामी भन्न सक्छौ किन यस्तो गरिस् भनेर । साथीहरुसँग हिँड्दा चाहिँ आफुलाई सुरक्षित पनि अनुभव हुन्छ ।
रिस्वी थापा: केटाहरुले जिस्काउँछ भनेर डर लाग्छ त्यहि भएर म एक्लै हिड्दिन ।
प्रस्तुति: संस्कृति चालिसे
मनैदेखि असुरक्षित Reviewed by nayapusta on Mar 30 . नेपाली समाजमा महिलालाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्छ । तर किशोरीहरू के सोच्छन् त नेपाली समाजका बारेमा ? के उनीहरू सहर नेपाली समाजमा महिलालाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्छ । तर किशोरीहरू के सोच्छन् त नेपाली समाजका बारेमा ? के उनीहरू सहर Rating: 0
माधवप्रसाद घिमिरे...मनबहादुर के.सी....